Newflex(DuraSeal) သည် အန္တရာယ်ကင်းခြင်း၊ ရာဘာသားကို တိကျစွာပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသော၊ မကျိုးမကွဲနိုင်သော၊ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင် အားကောင်းသော ရေလုံဆေးဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံများတွင် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
အမိုးအောက်ခံ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ အ၀တ်လျော်ခန်း၊ ရေကူးကန်၊ နံရံ၊ ဝရန်တာ၊ အပင်၊ စိုက်ပျိုးခန်း၊ ရေတန်းလျှောက်၊ ရေမြောင်း၊ အရည်သိုလှောင်ကန်များနှင့် စိုစွတ်သည့် နေရာများ၌ ရေလုံလွှာအဖြစ် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
ပုံးဖွင့်တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ နေရာမျိုးစုံအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊ အဆိပ်တောက်မဖြစ်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ ကြာရှည်စွဲမြဲစွာခံနိုင်ခြင်း၊ စွန်းထင်းမှုမရှိခြင်း၊ အနံ့မရှိခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
သုတ်လိမ်းမည့်မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့၍ အညစ်အကြေး၊ ဆီ၊ ဖယောင်းနှင့် အခြားကပ်ငြိတွယ်စေမည့် အရာများကင်းရှင်းရန် လိုပါသည် သုတ်လိမ်းမည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချိုင့်ခွက်များ၊ အပေါက်များရှိပါက ကြိုတင်၍ ပတ်တီးဖြင့် ဖာထေးပါ၊
သန့်ရှင်းသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Newflex ကိုလိုချင်သော အထူအနေအထား ရရှိစေရန် ဒလိမ့်(သို့) စုတ်တံတို့ဖြင့် နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်ခန့် သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ဆေးတထပ်နှင့် တထပ်ကြား သေချာစွာခြောက်သွေ့ပါစေ။
သန့်ရှင်းမျက်နှာပြင်တွင Newflex ကိုသန့်ရှင်းသော ရေ(၁၀)% နှင့်ရော၍ Primer အဖြစ် သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
နောက် Newflex ကို ဒုတိယအကြိမ် ၉၀ထောင့်မှန်ချိုး၍ (၁.၅) Lit/ စတုရန်းမီတာနှုန်းဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးပါ။
အရေးကြီးသော နေရာများ၊ ဥပမာ- အမိုး၊ ရေလှောင်ကန်၊ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ဂျိုင့်ဆက် နေရာများတွင် အားဖြည့်ဇကာ (Fiver Glass Wire Mesh) ကြားခံ၍ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
ကြွေပြားနှင့် ပါကေးခင်းလိုလျှင် Newflex ရေလုံလွှာဧ။် အပေါ်မှ ဘိလပ်မြေ (သို့) ရာဘာ အခြခံနှစ်မျိုး ကပ်ကော်ဖြင့်သုံး၍ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Deco-Newflex (High Performance Wet Area Waterproofing Systems)
DuraSeal has been specially developed asasingle component, high performance, synthetic liquid rubber membrane system to provide an effective, durable and elastic waterproofing membrane for wet areas. It can also be used for tanking and roofing purposes.
Safe, Non Hazardous
Resists Ponded Water
No mixing required, no errors in application Will not discolour tiles, grout, paint or cause water stains No toxic solvents, tar, isocyanate or chemicals in the DuraSeal system No lingering objectionable chemical or solvent smell Water-based product provides environmentally friendly usage Formsahomogeneous, waterproof barrier with no laps or joints Adheres strongly, compatible with all quality tile adhesives Does not become brittle with age does not re-emulsify or deteriorate in constantly wet conditions Specially formulated to resist high UV conditions of the tropics
Loss of Heating 1.03%
- Pre heat ageing
- Post heat ageing 46 to 50
50 to 55 Shore D
- @ 500% Elongation 2.50 MPa
2.00 MPa AS 1145 AS 1145
Elongation Approx. 600% AS 1145
Water Vapour Transmission Approx. 6.0 gm/mm/mV24 hrs ASTM E96
- Glass 165 to 168 N
50 to 55 N AS 1526
Chemical Immersion Resistance Passed -Water, Bleach, Detergent AS 1145
Moving Joint Test Passed CSIRO Method
Accelerated Weathering Passed - No defects ASTM D822A